Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamada Luyupolice-ku ma Galaa Mise waa Islaam? Nuura Afgaab
Ciidamada Luyupolice-ku ma Galaa Mise waa Islaam? Nuura Afgaab
Ciidamada Liuyupoliceka ee ka garab dagaalama ciidamada Itoobiya ee jooga Ogadeniya waa Somali jinsi ahaan waxayna ku hadlaan luuqada Somaliga. Dad badan oo aan aqoon ulaheen ayaa aaminsan in ciidamadani yahiin ciidamo Soomali ah oo Islam ah maadaamo Somalidu tahay dad muslimiin ah, waxayna ku doodaan wadankii waxaa loo sameyey ciidamo luqada iyo diinta aynu wadaagno.
Hadaba culimada islaamka gaar ahaan kuwa Soomalida iyo waxgaradka Somaliyeed hanoo sheegaan dadka sifooyinkan iyo dhaqankan ku dhaqma maaxaa lagu xugumin karaa?
1- Bishan barakaysan ee ramdalan xerayaha ciidankan hadad gasho dhaman ruux sooman malaha mid kamid ah ciidankan ayaan dhahay war maad soontaan wuxuuna ku jawaabay hadan soomayo maan xeroow noqodo?
Waxaa naloo xaqiijiyey in wax tukada ama sooma uuna kujirin dhamaantood.
2- Waxay cabaan khamrida iyo kiniiniyada maan dooriyaasha ah. Waxay leeyahiin hal hays ay ku tilmaamadsadan. Qamrada waxay oogu yeedhan caano soo qaad; nooca dhayda nooca dhanaanka taas oo kala ah noocyo aynaan garaneen.
Markay cabsan yahiin waxay dhahaan waan falalxayaa.
Oday ayaa wiilkiisa dhahay aabo diintee ku baneeysay waxan? Miyaada cadaabta Alle ka baqayn? Wuxuu ugu jawaabay aabo Cabdi ayaa iibaneyey. Aabo Cabdi ga uu sheegi waa Cabdi ilay
3- Uma kala laha dumarka iyo tumashadu laakin gabdhaha asturan haday diidan way meheriyaan ama xidhaan waxayna mehersadaan tiro kabadan 4.
Ciidankan oo loosameyey in ay la dagalamaan ciidamada jabhada ONLF ayaa wax ugu badan ee lagu abaal mariyo ay tahay daroogada ama khamrada.
Hadaba ciidankaasi maxay yahiin? Jawabta waxaanu udhaafi akhrista yaasha iyo culumada aan diintooda iibsan.
Noora Afgaab ONA/Adis ababa.
Halkan Ka Daawo Wareysgii Ugu Dambeeyay ee IleysTV:
ani waxaan aqondher ulehay nimankan marka shaqo kumale islam wayna ridoben ani waxan lakulmay mid kamid ah waxana ku,idhi maad tukatid waxuu igujawabay inta ay dagalka wado onlf waanalagadhafay saladii odanbi malihin